Saaxiibbaday way ogyihiin inaanan taageere u ahayn furayaasha QR (Quick Response). Waqtiga aan arko nambarka QR, go'aan ka gaadho haddii aan doonayo inaan iskaan, furo taleefankayga gacanta, furo arjiga si aan u baadho nambarka… oo run ahaantii aan u marsiiyo - Waxaan ku qori lahaa cinwaan degel. Waxaan sidoo kale u malaynayaa inay yihiin fool xun… haa, waan iri!
Waxay umuuqataa korsashada QR code is caqabad. 58% ka mid ah dadka la daraaseeyay ayaan aqoon u lahayn xeerarka QR. 25% dadkii la wareystay xitaa ma aysan ogeyn waxa ay ahaayeen! Difaaca furayaasha QR, maahan war xun. Dadku waxay isticmaali doonaan lambarrada QR markay filayaan qiimo dhimis iyo warshado kale ayaa u adeegsanaya inay si wax ku ool ah ula soo baxaan xogta.
Qaar ka mid ah tusaalooyinka aan soo arkay ee aan u maleeyay inay si wanaagsan u adeegsadeen Xeerarka QR:
Waxaan sidoo kale u maleynayaa inaan qarka u saaran nahay adeegsiga tikniyoolajiyadda iskaanka iyo aqoonsiga oo aad uga horumarsan xeerarka QR.